yiri ihe ọ bụla si PC ka TV | Chromecast Nkedo Chrome Taabụ
Mirror Ihe ọ bụla si gị PC Gị TV
Television ikiri agbanweela adi ihe karịrị afọ, si dị na-ekiri na mpaghara gị analogue ọwa, ọtụtụ ndị ọwa, nkwanye na ugbu a ị nwere ike yiri ihe ọ bụla site na PC gị gị TV. E nwere kemgbe ọtụtụ ụzọ na otú otu onye nwere ike yiri PC ka TV. Otu n'ime ndị mbụ ụzọ kemgbe ojiji nke HDMI gị HDTV. Ezie na nke a na-arụ ọrụ mara nke ọma n'ihi na ọtụtụ ndị, ya nnukwu mwepu bụ na gị PC ọnọdụ kpebisiri ike site ogologo nke HDMI USB. Taa niile na-agbanwe na ikike yiri PC ka TV-ejighi eriri site a ọtụtụ ngwá ọrụ, otu onye nke bụ Google Chromecast kwe gị ka ọ dịrị otú PC ihuenyo ka TV si n'ebe ọ bụla mfe nzọụkwụ na-eso.
Google Chromecast e gosiri dị ka otu n'ime top ngwaọrụ-ejighi eriri yiri PC ka TV n'ihi na nke ọtụtụ na-akpali akpali atụmatụ na-agụnye, ikike iji strimụ online videos, foto na music gị telivishọn iji bụghị nanị gị PC ma mbadamba na / ma ọ bụ smartphone, ọ na-akwado a ọnụ ọgụgụ nke ngwa ọdịnala na-agụnye YouTube, Netflix, HBO Go, Google Play Movies na Music, Vevo, ESPN, Pandora na Plex, na ya mfe set elu anyị na-atụle n'okpuru;
Nkedo Chrome Taabụ
Nzọụkwụ mbụ bụ iji wụnye Chromecast ngwa nke dị ebe a: https://cast.google.com/chromecast/setup/ Pịa "Google Nkedo" button na chrome ka ọ dịrị otú ị na-a taabụ,
Na na button, ọ ga-egosipụta ma ọ bụrụ na ị na-enwe ihe karịrị otu Chromecast on netwọk gị, ị ga-mgbe ahụ nwere iji họrọ Chromecast si menu nke ga-dropdown na gị Chrome taabụ ga-egosipụta na gị TV.
Kwụsị, ị nwere ike pịa nkedo button, wee họrọ "Kwụsị nkedo".
On nkedo button, ị nwere ike pịa "Wụnyenụ a Tab" ka ọ dịrị otú ọzọ taabụ.
Mgbe a na usoro dị mfe, i nwere ike inwe mgbanwe results ezie na ọ na-arụ ọrụ nke ukwu ọma.
Video faịlụ nwere ike streamed na Google Chrome taabụ.
Dịkwuo ahụmahụ mgbe nkwanye a video, ị nwere ike họrọ zuru-ihuenyo na mmepụta ngwaọrụ ga-dejupụta dum ihuenyo. I nwekwara ike iwelata yiri taabụ.
I nwekwara ike ịchọpụta na ụfọdụ video formats na-anaghị akwado, na ike ga efep ọbọhọ site n'ife gị dum na ihuenyo, nzọụkwụ nke nke anyị na-depụta n'okpuru;
On nkedo button ọzọ, e nwere otu obere akụ na na elu-nri akuku ebe ị na-ahụ ndị ọzọ nhọrọ.
Nkedo ABS kachasị maka audio
Na isoro usoro ndị anyị malitere n'elu, ị nwere ike chọpụtara na ụda na-emepụta si iyi ngwaọrụ, nke ahụmahụ nwere ike ghara ịbụ dị ka na-akpali akpali. "Wụnyenụ a taabụ (kachasị maka audio)" doziri na nta nsogbu. Ụda a bụ yiri gị mmepụta ngwaọrụ-enye gị ihe ọbụna mma mma.
Ụda na-achịkwa na gị ngwa / webpage / TV, gị PC olu na-aghọ-abaghị uru. The ogbi button na gị webpage bụ ihe ị ga-mkpa ogbi gị audio site na ngwaọrụ gị, dị ka e gosiri n'elu;
"Wụnyenụ dum ihuenyo" ga-enyere gị yiri ihe karịrị otu taabụ ma ọ bụ gị dum na desktọọpụ.
Nkedo na desktọpụ gị
Ọ na-kpọrọ "ibuo" dị ka ọ bụ a beta atụmatụ ma ọ ga-arụ ọrụ nke ọma.
Ị ga mkpa iji "na ihuenyo mkpebi" nhọrọ na gị na desktọọpụ. Nke a ị ga-esi site na nri ịpị na desktọọpụ.
Na Mkpebi panel, ị nwere ike ahụ họrọ gị TV dị ka gị abụọ ma ọ bụ ọbụna atọ ngosi.
Nke a na-azụ HDMI USB na-egbochi na ọnọdụ nke PC ezie na-enye a zuru okè mmepụta.
Mirroring gị dum na ihuenyo kwesịrị ekwe ka onye na-akpali ha PC ka ebe mgbe ha chọrọ ma ka nọgide na-enwe àgwà.
Mgbe ị na-ahọrọ na-mirror / igba gị TV, ị ga-ahụ a ịdọ aka ná ntị na ihuenyo egosipụta. Ị ga-pịa "Ee". (N'elu)
Mgbe gị na ihuenyo na-egosipụta na mmepụta ngwaọrụ, gị PC ga-egosipụta a obere akara mmanya nke ga-na ala na bụ ike dọkpụụrụ ka ọ bụla na ihuenyo ma ọ bụ ọbụna zoo ya site na ịpị "Zoo".
Nkedo nwere ike mgbe niile-akwụsị site na ịpị Nkedo, mgbe ahụ, "Kwụsị Ife".
Iji nweta ihe ọbụna mma video àgwà, ị nwere ike pịa "Wụnyenụ youtube.com" site dobe ala menu.
Nke a na ọrụ nwere ike mere site na ndị ọzọ ọrụ dị ka Netflix na dị ukwuu n'ihi na ọ iyi na gị na Chromecast si gị rawụta, ọ enwekwu àgwà site na iwepu kọmputa ihe na gụgharia usoro.
Nkedo ma ọ bụ mirroring bụ oké ọrụ bụghị naanị n'ihi na n'ụlọ ikiri kama ọbụna ruo n'ihu na-arụ ọrụ ma ọ bụ ọbụna na mahadum, ma ọ bụ mgbe ị chọrọ ele ma ọ bụ igosi na webpage. Ọ na-nwere ike ghara ịbụ nke àgwà dị ka Ijikọ PC ogologo gị TV ma na-ezi PC ọ ga-enye gị a ukwu ezi mma.
> Resource> emulator> Olee otú iji mirror ihe ọ bụla si PC ka TV